Wake wambona ephusheni insimu engapheli ngezimbali ezimnandi, izinyoni ezihamba phezu kwayo nelanga elikhanyayo elikhanyayo? Ngokuqinisekile uyazi ukuthi lo mbono ebusuku ubhekisela ngento enhle, enhle futhi ekhanyayo. Kodwa ngichaza kanjani iphupho lapho insimu emnyama yayicatshangelwa khona, inqwaba futhi ihamba phambili? Kulokhu nangezinye izici eziningi sizozama ukuqonda isihloko sethu.
Yeka amaphupho enhle amahle ahlelwe kahle
Lo mbono uhumusha kanjani incwadi yephupho? Insimu kanye ne-steppe njalo kubonisa injabulo ezayo, izinguquko eziphumelelayo ekuphileni, uthando olujabulisayo. Kodwa leli xabiso alilona iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, okokuqala, kuyadingeka ukuba unake zonke izinhlobo zezinto ezincane.
Uma ephusheni ubona insimu enkulu futhi engenamkhawulo enkulu lapho kuvuna isivuno esihle, kulindeleke izindaba ezinhle, impumelelo kuzo zonke izindaba, ukuchuma, inhlalakahle kanye nabangane abazinikele.
Ngenye indlela iphupho lokuhumusha iphupho ligcwaliseka ngayo embusweni wobusuku? Insimu ehlwanyelwe ngokugcwele izithembiso zokuthengiswa koroli, inzuzo, imali engalindelekile, noma ukukhula kakhudlwana emkhakheni wezemisebenzi.
Kuhunyushwa kahle njengephupho kanye nencwadi yasendulo yephupho lesiGreki: insimu kakolweni kusho impilo enhle, amandla amakhulu, impumelelo, impumelelo, injabulo, inhlanhla nothando.
Uma ubona insimu enhle eluhlaza futhi ngesikhathi esifanayo uzizwa ujabule futhi ukhululekile, ukhuluma ngenjabulo, isikhathi sokuzijabulisa esihle ebuthwaneni labangane abaqotho, injabulo engalindelekile, impumelelo ebhizinisini. Futhi, iphupho elinjalo lisho ukunqoba okulinde isikhathi eside phezu komphikisi ocasulayo.
Uyabona ukuthi umfudlana odlalwayo ugeleza kanjani kuwo wonke ama-steppe? Lesi yisibonakaliso esikhulu, ikakhulu kulabo abasesimweni esinzima. Kubantu abagulayo lokhu kusho ukusindiswa, kubantu abangashadile - ubudlelwano obuqinile futhi obujabulisayo, kulabo abalindile - ukufeza umgomo wabo owalinde isikhathi eside.
Ibhuku lephupho lichaza kanjani insimu lapho utshani obuhle obuluhlaza bukhula khona sonke isikhathi? Lokhu kubonisa usizo olungalindelekile lwezezimali. Ngakho-ke, thola amathikithi e-lottery ngokuphepha. Mhlawumbe inhlanhla.
Uma ephusheni lakho ubona insimu ebanzi, engapheli, ulinde ukukhushulwa emkhakheni wezemisebenzi futhi, ngokufanele, ukwanda okukhulu kweholo.
Yini enye enye incwadi ephupho ekhuluma ngalo mbono? Izinsimu, ezigcwele ngokuphelele utshani obumnandi, obude nobuhlaza, zikhulume ngokukhula okungokomoya noma ngomgomo ozofezwa maduzane ngaphandle komzamo omkhulu.
Uma i-steppe ihlukaniswe yindlela, lokhu akuwona uphawu oluhle kakhulu. Lephupho likhuluma ngobude bakho ezihlotsheni nabangane bakho. Uma lokhu kuqhubeka, usengozini yokushiywa yedwa impilo yakho yonke.
Uma ephusheni lakho ubonile insimu eluhlaza ebusika, lindela ibhande elide elimhlophe empilweni yakho.
Kuthiwani uma ubona insimu yamazambane? Lokhu kusho ukuthi izinto zizoletha inzuzo enkulu, ozokulahlekelwa maduzane. Okufanayo kusho insimu yephupho, lapho izintlobo zitshala khona.
Indlela yokuchaza insimu ehlongowe ephusheni
Uma uphupha ukuthi insimu yayilinywa - linda impumelelo. Kodwa ungakhohliswa ngaphambi kwesikhathi, lokhu kuzomele uzame.
Yini enye engayenza incwadi yephupho mayelana nalokhu? Izinsimu ezilima futhi zikhulule zisho ukuthi maduze uzobeka izinto ngokuhle kuzo zonke izindaba zakho.
Uma ubona inqubo yokulima izwe ngokwalo, lindela ukuthola isikhundla esiphakeme.
Uma uhamba ezweni elilima, impilo izomomotheka maduzane, futhi isiphetho sizoba nomusa kuzo zonke izindaba eziqalisiwe.
Lithini incwadi ethi iphupho, insimu iyalinywa, kodwa ingahlwanyelwa? Zizwe ukhululekile ukuqala okuhleliwe, ngoba inhlanhla nje ilindele wena.
"Insimu isabeka, insimu ibumnyama ..."
Uma ubona izwe elomile elinama-stacks we-straw, lindela izinkinga nezithiyo kunoma yiziphi izinyathelo.
Uma uphupha insimu ephusheni, lapho amabhuki e-birch yedwa - ungazitholi, ngoba awusoze ubuyela esikhathini esedlule.
Kuthiwani uma ubona ephusheni ukuthi umhlabathi wawugcwele ukhula? Lokhu kusho ukuthi endleleni eya emgomweni wakho kumele unqobe ubunzima nezinkinga eziningi.
Uma uphupha into esabekayo, eyedwa, insimu elahliwe, lokhu kuyisichazamazwi sekusasa lakho elikude. Uke wabona kulephupho ukuthi kuzokwenzekani empilweni yakho, uma ungenalo ithemba elincane futhi elinenjongo.
Uma ubona insimu encane, ngokuyinhloko uzikhawulela wena nabathandekayo bakho. Sula, ngoba impilo inikezwe kanye kuphela.
Kuthiwani uma uphupha nge-naked, field dreary? Lindela ubumpofu obukhulu nokuqedwa.
Uma ubona ukuthi le mpi isemkhakheni, linda umonakalo nokudumazeka. Ukuphila kwakho kuzogcwala ukuxabana, izingxabano kanye nempi. Kodwa hhayi njalo kulokhu, kufanele ulalele incwadi yokuphupha. Ukuchazwa kwamaphupho (field) kulokhu kungashintshwa kancane. Zizinakekele kwezinye izinto, ungazethembi abantu abangabazi, ungahlanganyeli kuzo zonke izinhlobo zobugebengu, bese impilo yakho izoshintsha kakhulu ukuze ibe ngcono.
Insimu ishisa? Lindela ukumemeza.
Ukuba khona kwephupho ensimini kusho ukuthini?
Ukulala lapho uhamba khona ensimini, ujabulele ukucula kwezinyoni, iphunga lezwe elisha, ukuthula, kusho isigaba esilandelayo sokuthula. Zonke izifiso zakho kanye nemigomo yakho izokwenziwa maduzane.
Uma uhamba ngehora iphupho, lokhu kusho izinkinga ezingenalutho. Ngakho zama ukwenza okunye okuzoletha imali engenayo.
Uma ephusheni ulandela insimu lapho izitshalo ezinameva ziqala khona imilenze yakho, lungiselela ukulahlekelwa ohlangothini lomuntu othandekayo.
Iphupho ongenakuyithola indlela yokuphuma lisho inhlalakahle nenempumelelo ebhizinisini.
Uma nje uhambahamba ensimini, futhi umphefumulo awunalutho - othile ukhuluma kabi ngawe.
Iphupho lapho ulandela khona insimu yezinga, likhuluma ngokuphila okubushelelezi nokuzolile. Ingabe igoqa, igwegwe futhi ayijabulisi? Ukuphila kwakho konke kuzogcwala ngokuphelele izithiyo nokulwa.
Kuthiwani uma lowo mphupha engedwa phakathi kwensimu enkulu? Lokhu kusho ukuthi ukuphila kwakhe okwamanje kunzima, kodwa kuzothatha isikhathi esithile, futhi yonke imisebenzi yakhe iyohlonishwa.
Iyini iphupho lapho umphuphi ehilelekile emsebenzini
Uma usebenza njengengozi, linda izithiyo ezinkulu endleleni yakho eya emgomweni ohlosiwe.
Kuthiwani uma uhlama insimu ephusheni? Umsebenzi wakho maduzane uzoba nenzuzo.
Yini enye okungenzeka ukuthi incwadi yephupho ingayitshela ? Kungani uphupha ngensimu ohlwanyela irayisi? Lokhu kusho ukuthi maduze uzoba nohambo. Uma ufundisa abantu ukuthi bangahlwanyela kanjani - hamba uhambo olude. Ukuphoqelela abantu ukuba basebenze - kube injabulo nokuchuma ebhizinisini.
Kuthiwani uma insimu yayiyiphupho yengane?
Omunye akufanele abe othembekile kakhulu futhi avuleke, ikakhulukazi kubantu abangabazi. Lokhu kungathinta kakhulu impilo yangemva kwesikhathi. Ngezinye izikhathi kufanele uqaphele, ubuqili, kanzima futhi usheshe.
Ingabe insimu ephupho ingasho ngothando
Yini ongayifaka encwadini yokuphupha? Insimu inhle futhi ifakwe iqhwa umhlangano osheshayo nomuntu okhangayo, othandekayo nomusa.
Iphupho oya kulo yedwa enkundleni ehlobo elishisayo futhi elihle lichaza ukulungele ingxenye yothandekayo.
Uma insimu oyiphupha ehlobo - ungathembi muntu, ikakhulukazi ubhekisela kulabo abazovula ibhizinisi labo esikhathini esizayo esiseduze, bebambisana nomuntu ongajwayelekile. Thatha isikhathi sakho, sihlole, qinisekisa ngezinhloso zakho bese usithemba ngamaphrojekthi akho kanye namasu akho esikhathini esizayo.
Uma iphupho elinjalo liphupho ekwindla, incwadi yephupho ichaza kanjani? Insimu yemibala isho impilo enhle kakhulu futhi ilulame ngokushesha. Uma kungenalutho - cabanga ukuthi konke kuhambisane nempilo yakho.
Kuthiwani uma insimu inephupho ebusika? Lo mbono ebusuku ubonisa ukuthi maduzane empilweni yakho umcimbi ongalindelekile uzokwenzeka. Kungakhathaliseki ukuthi kuhle noma kubi kuncike kwimininingwane ebonwe. Iyini insimu enhle, enelanga futhi eluhlaza? Ibhuku lephupho lithembisa umcimbi oqhakazile futhi ongenakulibaleka. Umnyama, wesabeka, ubanda - kufanele uqaphele.
Futhi kanjani ukuchaza insimu iphupho entwasahlobo? Lindela impilo ethule, ephathekayo nezolile.
Uma ubonile iphupho eliphathwa kabi, cabanga ngakho, mhlawumbe kufanele ushintshe okuthile empilweni yakho. Kunoma yikuphi, ungayithathi ngokungathí sina, ngoba ungumphathi wezinhloso zakho, futhi iphupho liyisixwayiso mayelana nezenzakalo ezizayo ozozilungisa. Amaphupho amahle!
Amaphi amaphupho anomaphi amaphupho amabi?
Umsuka wegama elithi "enkundleni". Kuyini enkundleni?
Phumula Ngo Turtsii.obzor zokungcebeleka ethandwa.
Lyell Syndrome. Yini odinga ukuyazi?